Advantages of copper tubes - SMAK INDUSTRIES CO ။ , LTD.
pancake coiled ကြေးနီပြွန်
Striaight coppr ပြွန်
ကြေးနီစာရွက် / ချွတ်
ကြေးနီ & ဘားစာရွက်
ကြေးနီ & ကြေးဝါချွတ်
ကြေးနီ busbar နှင့်လှံတံ
နေအိမ် » Advantages of copper tubes
The chemical properties of copper are stable, and the characteristics of cold resistance, heat resistance, pressure resistance, ချေးခုခံ, and fire resistance (the melting point of copper is up to 1083 degrees Celsius) are integrated into one. It can be used foralong time in different environments. The service life of copper pipes can be as long as the service life of buildings, or even longer
လိပ်စာ: Songxia စက်မှုဥယျာဉ်, Songgang ခရိုင်, Nanhai, ဖိုရှန်မြို့, ဂွမ်ဒေါင်း, တရုတ်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များအားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များပေးရန်ကြိုးစားသည်. သတင်းအချက်အလက်တောင်းခံပါ,နမူနာ & ကိုးကား,ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ!
SMAK INDUSTRIES CO ။ , LTD. © 2021 မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး အသုံးပြုမှုစည်းကမ်းချက်များနှင့် Privacy မူဝါဒ